Inqubomgomo yamakhukhi - Buka i-Rapport
Le Nqubomgomo Yamakhukhi ichaza ukuthi kanjani Buka iRipport, LLC ("Company","we","us", futhi"yethu") isebenzisa amakhukhi nobuchwepheshe obufanayo ukukubona lapho uvakashela amawebhusayithi ethu ku- https://watchrapport.com/, ("AmawebhusayithiIchaza ukuthi buyini lobu buchwepheshe nokuthi kungani sibusebenzisa, kanye namalungelo akho okulawula ukubusebenzisa kwethu.
Kwezinye izimo singahle sisebenzise amakhukhi ukuqoqa imininingwane yakho, noma lokho kuba imininingwane yomuntu uma sikuhlanganisa neminye imininingwane.
Amakhukhi amafayili emininingwane emincane abekwa kwikhompyutha yakho noma kwidivayisi yakho ephathekayo lapho uvakashela iwebhusayithi. Amakhukhi asetshenziswa kabanzi ngabanikazi bewebhusayithi ukwenza amawebhusayithi abo asebenze, noma ukusebenza kahle, kanye nokunikeza imininingwane yokubika.
Amakhukhi asethwe ngumnikazi wewebhusayithi (kulokhu, Buka iRipport, LLC) abizwa ngokuthi "amakhukhi eqembu lokuqala". Amakhukhi asethwe amaqembu ngaphandle komnikazi wewebhusayithi abizwa ngokuthi "amakhukhi wesithathu". Amakhukhi avela eceleni avumela izici zomuntu wesithathu noma ukusebenza ukuthi kunikezwe kuwebhusayithi yakho (noma isib. Njengokukhangisa, okuqukethwe okusebenzisanayo nezibalo). Amaqembu asetha la makhukhi wesithathu angayibona ikhompyutha yakho uma ivakashela iwebhusayithi okukhulunywa ngayo nalapho ivakashela amanye amawebhusayithi.
Kungani sisebenzisa amakhukhi?
Sisebenzisa kuqala neyesithathu amakhukhi ephathi ngenxa yezizathu eziningana. Amanye amakhukhi ayadingeka ngezizathu zobuchwepheshe ukuze amawebhusayithi wethu asebenze, futhi siwabhekisa kulawa njengamakhukhi "abalulekile" noma "adingeka kakhulu". Amanye amakhukhi asenza sikwazi ukulandelela futhi siqondise izintshisekelo zabasebenzisi bethu ukuthuthukisa ulwazi kuzakhiwo zethu eziku-inthanethi. Abantu besithathu bakhipha amakhukhi ngamawebhusayithi ethu ukukhangisa, ama-analytics nezinye izinjongo. Lokhu kuchazwe ngokuningiliziwe ngezansi.
Izinhlobo ezithile zokuqala neyesithathu amakhukhi ephathi akhonjelwa kumawebhusayithi ethu futhi izinhloso azenzayo zichazwe ngezansi (sicela wazi ukuthi amakhukhi athile ahanjiswayo angahluka ngokuya ngezakhiwo ezithile ze-Intanethi ozivakashelayo)
Ngingawalawula kanjani amakhukhi?
Unelungelo lokunquma ukuthi uyawamukela noma uyawala amakhukhi. Ungasebenzisa amalungelo akho amakhukhi ngokusetha okuncamelayo ku-Cookie Consent Manager. I-Cookie Consent Manager ikuvumela ukuthi ukhethe ukuthi iziphi izigaba zamakhukhi owamukelayo noma owenqabayo. Amakhukhi abalulekile awakwazi ukwaliwa njengoba edingeka kakhulu ukukunikeza ngezinsizakalo.
Umphathi Wemvume Yekhukhi angatholakala kusibhengezo sesaziso nakuwebhusayithi yethu. Uma ukhetha ukwenqaba amakhukhi, ungaqhubeka usebenzise iwebhusayithi yethu yize ukufinyelela kwakho kokunye ukusebenza nezindawo zewebhusayithi yethu kungavinjelwa. Ungasetha futhi ubuyekeze izilawuli zesiphequluli sakho sewebhu ukwamukela noma ukwenqaba amakhukhi. Njengoba izindlela onqaba ngazo amakhukhi ngokusebenzisa izilawuli zesiphequluli sakho sewebhu ziyahlukahluka kusuka kusiphequluli kuya kusiphequluli, kufanele uvakashele imenyu yosizo lwesiphequluli sakho ukuthola eminye imininingwane.
Ngaphezu kwalokho, amanethiwekhi amaningi wokukhangisa akunikeza indlela yokuphuma ekukhangiseni okubhekiswe kukho. Uma ungathanda ukuthola eminye imininingwane, sicela uvakashele http://www.aboutads.info/choices/ or http://www.youronlinechoices.com.
Izinhlobo ezithile zamakhukhi wenkampani yokuqala neyesithathu ezinikezwa ngamawebhusayithi ethu nezinjongo ezizenzayo zichazwe kuthebula elingezansi amakhukhi akhonzwayo angahluka ngokuya ngezakhiwo ezithile ze-inthanethi ozivakashelayo):
Amakhukhi wewebhusayithi abalulekile:
Lawa makhukhi adingeka kakhulu ukukunikeza izinsizakalo ezitholakala kumawebhusayithi ethu futhi usebenzise ezinye izici zawo, njengokufinyelela ezindaweni ezivikelekile.
Injongo: Kusetshenziselwe ukuqopha ukubukwa kwezivakashi okuyingqayizivele kwesibhengezo semvume
isevisi: Okwamanje Buka Inqubomgomo Yobumfihlo Yesevisi
Izwe: I-united states
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: 1 ngonyaka
Injongo: Kusetshenziswe yi-Cloudflare ukukhomba amaklayenti ngamanye ngemuva kwekheli le-IP elabiwe, futhi kusetshenziswe izilungiselelo zokuphepha ngokwesisekelo seklayenti ngalinye. Le ikhukhi yohlobo lwe-HTTP ephela ngemuva konyaka ongu-1.
isevisi: I-CloudFlare Buka Inqubomgomo Yobumfihlo Yesevisi
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: izinsuku 30
Amakhukhi wokusebenza nokusebenza:
Lawa makhukhi asetshenziselwa ukuthuthukisa ukusebenza nokusebenza kwamawebhusayithi ethu kepha awabalulekile ekusetshenzisweni kwawo. Kodwa-ke, ngaphandle kwalawa makhukhi, ukusebenza okuthile (njengamavidiyo) kungahle kungatholakali.
Injongo: Ngokuxhaswa okuqhubekayo kokunamathela ngamacala wokusebenzisa we-CORES ngemuva kokuvuselelwa kweChromium, sakha amakhukhi angeziwe okunamathela kulezo zici ezinamathela kubude besikhathi ezibizwa nge-AWSALBCORS (ALB).
isevisi: Ama-Web Web Services Buka Inqubomgomo Yobumfihlo Yesevisi
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: izinsuku 7
Injongo: Le khukhi isetshenziselwa ukuguqula izithombe ze-trustmark ezintantayo ngokuya ngokuthi isivakashi sike sayibona phambilini noma cha.
isevisi: Indawo ethembekile
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: 5 imizuzu
Injongo: Kusetshenziswa amawebhusayithi asebenza kungxenyekazi yefu ye-Windows Azure yokulinganisa umthwalo.
isevisi: I-Azure Buka Inqubomgomo Yobumfihlo Yesevisi
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: Iseshini
Injongo: Lawa makhukhi asenza sikwazi ukwaba ithrafikhi yeseva ukwenza isipiliyoni somsebenzisi sibe bushelelezi ngangokunokwenzeka. Okubizwa ngokuthi yi-load balancer kusetshenziselwa ukunquma ukuthi iyiphi iseva okwamanje enokutholakala okuhle kakhulu. Imininingwane eyenziwe ayikwazi ukukukhomba njengomuntu oyedwa.
Injongo: Isetshenziswa maqondana nenqola yokuthenga.
isevisi: Shopify.com Buka Inqubomgomo Yobumfihlo Yesevisi
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: izinsuku 14
Injongo: Le khukhi ibhalelwe ukusiza ngokuphepha kwesayithi ekuvimbeleni ukuhlaselwa kwe-Cross-Site Request Forgery.
isevisi: Isizinda sewebhusayithi yomkhangisi Buka Inqubomgomo Yobumfihlo Yesevisi
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: 2 amahora
Injongo: Le khukhi isetshenziselwa ukulandela ngomkhondo ukuvakashelwa kweTrustsite.
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: 1 usuku
Amakhukhi we-Analytics nokwenza ngezifiso:
Lawa makhukhi aqoqa imininingwane esetshenziswa kwifomu elihlanganisiwe ukusisiza siqonde ukuthi amawebhusayithi ethu asetshenziswa kanjani noma ukuthi imikhankaso yethu yokumaketha isebenza kangakanani, noma ukusisiza ukuthi sikwenzele amawebhusayithi wethu.
Injongo: Setha i-Google ukusetha i-ID yomsebenzisi ehlukile ukukhumbula okuncamelayo komsebenzisi. Ikhukhi eliqhubekayo elihlala izinsuku eziyi-182
isevisi: -Google Buka Inqubomgomo Yobumfihlo Yesevisi
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: 6 izinyanga
Injongo: Ithumela idatha efana nokuziphatha kwezivakashi nedivayisi ku-Google Analytics. Iyakwazi ukulandela umkhondo wezivakashi kuzo zonke iziteshi zokumaketha namadivayisi. Yikhukhi yohlobo lwe-pixel tracker enomsebenzi wayo uhlala ngaphakathi kweseshini yokuphequlula.
isevisi: -Google Analytics Buka Inqubomgomo Yobumfihlo Yesevisi
Injongo: Thenga izibalo.
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: 30 imizuzu
Injongo: Iqopha i-ID ethile esetshenziselwa ukuqhamuka nedatha emayelana nokusetshenziswa kwewebhusayithi ngumsebenzisi. Yikhukhi le-HTTP eliphela ngemuva kweminyaka emi-2.
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: Unyaka owodwa izinyanga eziyi-1 izinsuku ezingama-11
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: Izinyanga ze-11 izinsuku ze-30
Injongo: Igcina ukungena kwe-ID eyingqayizivele esetshenziselwa ukuqhamuka nedatha yezibalo ekusetshenzisweni kwewebhusayithi izivakashi. Luhlobo lwamakhukhi we-HTTP futhi luphelelwa yisikhathi ngemuva kweseshini yokuphequlula.
Injongo: Isetshenziselwe ukuqapha inani lezicelo zeseva ye-Google Analytics lapho usebenzisa i-Google Tag Manager
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: Iminithi ye-1
Lawa makhukhi asetshenziselwa ukwenza imilayezo yokukhangisa ifaneleke kakhulu kuwe. Benza imisebenzi efana nokuvimbela isikhangiso esifanayo ukuthi singaveli futhi, ukuqinisekisa ukuthi izikhangiso zikhonjiswa kahle abakhangisi, futhi kwezinye izimo bakhetha izikhangiso ezincike kuzintshisekelo zakho.
Injongo: Ikhukhi leseshini elisetshenziselwe ukuhlola ukuthi ingabe isiphequluli somsebenzisi siyawasekela amakhukhi.
isevisi: DoubleClick Buka Inqubomgomo Yobumfihlo Yesevisi
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: 15 imizuzu
Injongo: Landelela amakhasi okufika.
Injongo: Kusetshenziselwe ukukala isilinganiso sokuguqulwa kwezikhangiso ezethulwe umsebenzisi. Kuphelelwa yisikhathi eminyakeni engu-1.5.
Injongo: Thenga ama-analytics ahlobene nokumaketha nokudluliselwa.
Lawa amakhukhi angakahlukaniswa ngezigaba. Sikunqubo yokuhlukanisa la makhukhi ngosizo lwabahlinzeki bawo.
Igama: imikhiqizo yehabhu-yakamuva
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: iqhubeka
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: izinsuku 9
Igama: ws-watch-rapport.myshopify.com-countdownIsikhathi sesikhathi
Igama: inguqulo ye-lh-qv-version
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: Iminyaka eyi-9 izinsuku eziyi-6
Igama: isikhathi somlingani
Igama: isitayela se-lh-qv
Igama: isivakashi sokuqala
Igama: efakazela.isikhathi sokuqala-sesivakashi
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: Iminyaka emi-4 izinyanga eziyi-11 izinsuku ezingama-29
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: Iminyaka emi-9 izinyanga eziyi-11 izinsuku ezingama-28
Kuphelelwa yisikhathi ngo-: 4 amahora
Igama: ws-watch-rapport.myshopify.com-cartIsitembu sesikhathi esigciniwe
Kuthiwani ngobunye ubuchwepheshe bokulandela umkhondo, njengama-web beacon?
Amakhukhi akuyona ukuphela kwendlela ukubona noma ukulandelela izivakashi kuwebhusayithi. Singasebenzisa obunye ubuchwepheshe obufanayo ngezikhathi ezithile, njengama-web beacons (kwesinye isikhathi abizwa ngokuthi "ukulandelela amaphikseli" noma "ama-gifs acacile"). Lawa ngamafayili emidwebo emincane aqukethe okokuhlonza okwehlukile okusenza sikwazi ukubona lapho othile evakashele amawebhusayithi ethu noma wavula i-imeyili ehlanganisa nabo. Lokhu kusivumela, isibonelo, ukuqapha amaphethini womgwaqo wabasebenzisi kusuka ekhasini elilodwa ngaphakathi kwewebhusayithi ukuya kwelinye, ukuletha noma ukuxhumana namakhukhi, ukuqonda ukuthi ngabe ufikile kuwebhusayithi kusuka kusikhangiso esiku-inthanethi esiboniswe kuwebhusayithi yomuntu wesithathu, ukuthuthukisa ukusebenza kwesayithi, nokukala impumelelo yemikhankaso yokukhangisa nge-imeyili. Ezimweni eziningi, lobu buchwepheshe buncike kumakhukhi ukuze asebenze kahle, ngakho-ke ukwenqaba amakhukhi kuzophazamisa ukusebenza kwawo.
Ngabe usebenzisa amakhukhi weFlash noma izinto ezabiwe zendawo?
Amawebhusayithi angasebenzisa futhi okubizwa nge- "Flash Cookies" (okwaziwa nangokuthi Izinto Ezabiwe Zendawo noma i- "LSOs"), phakathi kwezinye izinto, ukuqoqa nokugcina imininingwane mayelana nokusebenzisa kwakho izinsiza zethu, ukuvimbela inkohliso nokwenza eminye imisebenzi yesayithi.
Uma ungafuni ukuthi i-Flash Cookies igcinwe kwikhompyutha yakho, ungalungisa izilungiselelo ze-Flash player yakho ukuvimba isitoreji seFlash Cookies usebenzisa amathuluzi aqukethwe ku Iphaneli Yezilungiselelo Zesitoreji Sewebhusayithi. Ungalawula futhi ama-Flash Cookies ngokuya kufayela le- Iphaneli Yezilungiselelo Zesitoreji Somhlaba Wonke futhi ukulandela imiyalo (engafaka imiyalo echaza, isibonelo, ukuthi ungasusa kanjani ama-Flash Cookies akhona (okubhekiswe "kulwazi" kusayithi le-Macromedia), ukuthi ungavimbela kanjani ama-Flash LSO ukuthi abekwe kukhompyutha yakho ngaphandle kokuthi ubuzwe, futhi ( ngeFlash Player 8 nakamuva) ukuthi uwavimbela kanjani amaFlash Cookies angalethwa opharetha bekhasi okulo ngaleso sikhathi).
Sicela wazi ukuthi ukusetha iFlash Player ukuthi ikhawulele noma ikhawulele ukwamukelwa kwamaFlash Cookies kunganciphisa noma kuphazamise ukusebenza kwezinye izinhlelo zokusebenza zeFlash, kufaka phakathi, okungenzeka, iFlash application esetshenziswa maqondana nezinsizakalo zethu noma okuqukethwe okuku-inthanethi.
Ingabe uyakunikeza ukukhangisa okuqondisiwe?
Abantu besithathu bangaphakela amakhukhi kukhompyutha yakho noma kudivayisi yakho ephathekayo ukukhangisa ngamawebhusayithi ethu. Lezi zinkampani zingasebenzisa imininingwane ngokuvakashela kwakho lawa namanye amawebhusayithi ukuze zinikeze izikhangiso ezifanele mayelana nezimpahla nezinsizakalo ongahle uzithande. Zingasebenzisa nobuchwepheshe obusetshenziselwa ukukala ukusebenza kwezikhangiso. Lokhu kungafezwa ngabo besebenzisa amakhukhi noma ama-web beacon ukuqoqa imininingwane mayelana nokuvakasha kwakho kule nakwamanye amasayithi ukuze unikeze izikhangiso ezifanele mayelana nezimpahla nezinsizakalo ezingaba nentshisekelo kuwe. Imininingwane eqoqwe ngale nqubo ayenzi thina noma bona bakwazi ukukhomba igama lakho, imininingwane yokuxhumana noma eminye imininingwane ekhomba wena ngqo ngaphandle kokuthi ukhetha ukukunikeza lokhu.
Uzoyibuyekeza kangaki le Nqubomgomo Yamakhukhi?
Singabuyekeza le Nqubomgomo Yamakhukhi ngezikhathi ezithile ukuze ibonise, ngokwesibonelo, izinguquko kumakhukhi esiwasebenzisayo noma ngezinye izizathu zokusebenza, zomthetho noma zokulawula. Uyacelwa ukuthi uphinde uvakashele le Nqubomgomo Yamakhukhi njalo ukuze uhlale unolwazi ngokusebenzisa kwethu amakhukhi nobuchwepheshe obuhlobene nabo.
Idethi ephezulu yale Nqubomgomo Yamakhukhi ikhombisa ukuthi igcine ukubuyekezwa nini.
Ngingatholaphi olunye ulwazi?
Uma unemibuzo mayelana nokusebenzisa kwethu amakhukhi noma obunye ubuchwepheshe, sicela usithumele i-imeyili ku: usizo@watchrapport.com noma ngeposi ku:
Ucingo: (800) 571-7765
Le nqubomgomo yekhukhi idalwe kusetshenziswa i- Umphathi Wemvume Yekhukhi.